C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan kooxaha dhigta isbaarooyinka – STAR FM SOMALIA
C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan kooxaha dhigta isbaarooyinka
Madaxweynaha Maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan kooxaha dhigta isbaarooyinka, isagoo ugu baaqay bulshada ku dhaqan Gobolka Mudug inay meel uga soo wada jeestaan.
C/kariin Guuleed oo qeybaha bulshada kula hadlayay magaalada Gaalkacyo ayaa uga mahad celiyay bulshada Galmudug in meesha laga saaro Isbaarooyinka, kaasoo uu tilmaamay inay aheyd astaan mugdi ku ah deegaanada Mudug iyo Galgaduud.
“Anaga iyo dhamaan beelaha dega Gobolka waxaa isla garanay inaan meel uga soo wada jeesano isbaarada, odayaasha waxay saxiixeen qoraal ah qof alla qofkii dhigta isbaaro ee ku dhinta dhiigiisa waa wax aan ka soo qaad laheyn”ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.
Maamulka Galmudug ayaa maalmihii la soo dhaafay bilaabay howl galo ka dhan ah isbaarooyinka la dhigto deegaanada, waxaana jiray dagaalo dhex maray ciidamada Galmudug iyo maleeshiyooyin isbaaro dhigta.
Dhinaca kale Madaxweynaha Galmudug ayaa uga warbixiyay qeybaha bulshada heshiiskii uu magaalada Jigjiga kula soo galay Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, isagoo tilmaamay in aanay jiri doonin ciidan iyo hub ka gudba xuduuda Soomaaliya.
Madaxweyne Geelle oo markale loo caleemasaaray madaxtinimada dalka Jabuti (Daawo Sawiro)
Faarax C/qaadir oo ka hadlay Wararka Sheegaya in uu yahay Musharax (Daawo Sawirada)